Fampiharana ankafizin'i Manuel Ramírez | Androidsis
Manaraka ireo lahatsoratra roa teo alohan'ny mpiara-miasa amiko Francisco Ruiz y Cristina Torres sary placeholder, mandroso mankany asehoy anao ireo fampiharana tiako izay ananako amin'ny finday Android. Mbola betsaka ireo dimy ambin'ny folo asehoko etsy ambany, toy ireo fanta-daza toa ny WhatsApp, Chrome, Facebook, YouTube na Twitter.
Matetika aho mampiasa ny finday avo lenta noho ny antony maro samihafa, manomboka amin'ny fampiasana azy io hitetezana rehefa mitondra fiara miaraka amin'ny tambajotra sosialy Waze aho, ka hatramin'ny inona no azo ampifandraisina amin'ny fotoana rehetra amin'ireo mpanakanto arahiko avy any Behance, na inona izany dia. mandalo sary mahatsikaiky hitako tao amin'ny Internet avy amin'ny solosaina mankany amin'ny fifandraisana amin'i Pushbullet. Ny iray amin'ireo faharatsiana lehibe ananako amin'ny Android dia ny apps, noho izany dia mametraka iray tsy tapaka aho hanesorana ny hafa, noho izany ny medley amin'izy ireo dia manaitra indraindray ary mahatonga azy io hihoatra ny fampiharana 130 na mihoatra aza amin'ny fotoana sasany. Ary tsy hadinoko fa indraindray aza manana sokajy maromaro aho, indraindray dia sarotra amiko ny manapa-kevitra amin'ny iray, satria raha ny rohy mivantana avy any Imgur dia mampiasa Firefox aho ary mivezivezy any Chrome ohatra.
1 Ny fampiharana tiako indrindra
1.4 Sambo ho an'ny voat
1.5 sary haingana
1.13 Yahoo Weather
1.14 Mpitarika manontolo
Ny fampiharana tiako indrindra
Na dia tamin'ny kinova taloha aza dia nampiasaiko io, na dia fitambarana tranonkala aza. Fa nanomboka kinova vaovao izay namboarina hatramin'ny voalohany Izaho aza mampiasa azy bebe kokoa. dia iray amin'ireo fampiharana ireo Mila mandany fotoana mahafinaritra miaraka amin'ireo sary samihafa sy fironana GIF aho amin'izao fotoana izao.
Ny cocktail omen'i Imgur anao dia sarotra ny mahita amin'izao fotoana izao amin'ny internet ka io no iray amin'ireo ankafiziko izay hapetrako foana.
Imgur - Memes, GIF & horonan-tsary
Es tambajotra sosialy ho an'ny mpanakanto Ary eo aho manana ny portfolio izay andraisako anjara sy ifandraisako amin'ireo mpanakanto hafa amin'ity tambajotra sosialy lehibe ity ho an'ny karazana mpampiasa rehetra, na matihanina izy ireo na tsia. Fampiharana Android voakarakara tsara izay mampahafantatra anao raha misy olona tia ny iray amin'ireo zavatra noforoninao na ampiasaina hanaraka ny mpanao sary malaza manerantany.
Raha tianao ny tontolon'ny zavakanto Izy io dia iray amin'ireo tena ilaina amin'ny Android.
Amin'ny maha mozika ahy dia fialamboly hafa, Soundcloud Io no iray amin'ireo tiako indrindra izay ananako vonona foana ao mba hanehoana ahy mozika techno DJ set. Tiako ny mozika elektronika ka SoundCloud dia iray amin'ireo vavahady tsara indrindra hahitana hira, mpitendry ary DJ vaovao.
Sambo ho an'ny voat
Ho an'ireo mpampiasa izay "nalahelo" kely tamin'ny fanovana farany an'ny reddit, Boats no rindrambaiko izay mampiditra ny iray amin'ireo safidy hafa ao aminy. Voat.co no tohiny ary manompo amin'ny fomba mitovy amin'ny vavahadin-tserasera. Amin'ny teny Anglisy izany raha ny fahitana an'i Imgur fa mandritra ny fotoam-pialana voly sy milamina dia tonga lafatra.
Sambo ho any Voat
Mamadika fialam-boly kely amin'ny fampiharana ho galeriana izao Miaraka amin'ny Quickpic aho mandrakizay amin'ny Android. Izaho koa dia manana Sony Album nametraka sy Google Photos mihitsy, fa ny lanja maivana, interface tsara ary fahalalàn'ity fampiharana ity dia hita ho toy ny galeria tianao.
Mpamaky RSS mandritra ny androm-piainako ary izany Mbola nametraka teo aho ary avy amin'izany no ananako ny vaovao mifandraika rehetra miaraka amin'ireo lohahevitra tena mahaliana ahy. Raha te hampahafantarina ahy dia manana widget ao amin'ny birao miaraka amin'ny RSS voasokajy izay misy ifandraisany amin'ny vaovao aho, mba hahitako izay mitranga manerantany.
Izaho no izy forum be mihitsy ary ny HTCmania sy ny XDA Forums dia roa amin'ireo toerana itodihako foana hahitana izay vaovao amin'ireo terminal izay itiavako ny maro hafa. Rindrambaiko izay mandeha tsara, ary na dia misy aza ny kinova sasany dia nanakorontana zavatra kely fotsiny izy ireo, dia mbola eo ihany izy io ho ireo tianao indrindra.
Nova Launcher no mpandefa fampiharana tiako indrindra. Jereo, efa nividy olon-kafa vitsivitsy aho ary nanandrana ny maro tamin'izy ireo, fa ny azy ireo fahatsorana, fampisehoana, safidy feno ary interface izay mitondra ny zava-drehetra ny tsara indrindra amin'ny kinova Android ankehitriny, amin'ity tranga ity Lollipop, dia mahavita manana azy ho lehibe indrindra.
Para mamindra rakitra avy amin'ny solosaina Amin'ny telefaona iray segondra dia manana Pushbullet aho. Tsy mieritreritra an'izany mihitsy aho, bokotra totozy ankavanana, alefaso amin'ny telefaoniko ary any aho manana ny sary ao amin'ny bara fampandrenesana. Tsindrio io ary zarao amin'ireo fampiharana rehetra anananao amin'ny telefaonao. Haingam-pandeha sy mahavariana tsy manahy zavatra iray.
Rehefa tsy maintsy mandalo rakitra be eo anelanelan'ny fitaovana samihafa amin'ny tambajotra iray ihany ny trano Mampiasa Dukto aho. Ampiasao ny bandwidth rehetra an'ny WiFi fa aza miditra amin'ny zavatra rehetra. Haingam-pandeha sy mahomby amin'ny zavatra tadiaviko amin'ny fampiharana an'ity karazana ity.
Developer: Emmanuel Colombo
Como kalandrie widget ho an'ny birao Mampiasa an'ity rindrambaiko ity aho izay manana kalitao be dia be ary misoratra tanteraka miaraka amin'ilay tonga tsy misy ao amin'ny Android. Bebe kokoa holazaina momba a widget tsara.
Volana: Widget kalandrie
Developer: Fampiharana labozia
Para famantaranandro fanairana ary fanairana ara-potoana hatramin'ny nandefasana azy. dia interface tsara sy intuitive dia mbola toy ny famantaranandro fanairana unpretentious. Tsy mila zavatra hafa ankoatry ny nomen'ny Timely ahy tonga lafatra indrindra amin'ny filako.
Mahalala ny toetr'andro ampiasako Yahoo Weather. ny tena interface tsara, ny karazana fampahalalana isan-karazany, ny widgets samihafa ary na ny mety hanovana ny toerana misy ny data rehetra atolotra avy amin'ny app mihitsy.
Ny mpikaroka rakitra ankafiziko ary entiko amin'ny finday avo lenta ho fahatsiarovana an'ity fampiharana tsara ho an'ny PC ity. Miaraka amin'ny interface iray hafa tanteraka noho izay manjaka ankehitriny Izy io dia manana io fifandraisana manokana io miaraka amin'ireo safidy marobe izay tsy ampy ao amin'ny fahatsiarovako anaty ny findaiko.
Rehefa mila mankany afovoan'i Madrid aho Mampiasa ity app ity aho hisorohana ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Ny fomba tsara indrindra hahafantarana raha misy ny lozam-pifamoivoizana na tranga iray miaraka amin'ny fanampian'ny mpampiasa rehetra mandrafitra ity tambajotra sosialy ity. Ankoatr'izay dia tiako ny manampy teboka ary miakatra amin'ny latabatry ny mpampiasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Fampiharana ankafizin'i Manuel Ramírez
Hariva avy any Caracas-Venezoela
Andriamatoa Manuel Ramirez, azonao omena ahy mailaka ve aho hanontany anao fanontaniana izay tiako homena olona hanavao ny fitaovako